Sidee to cancel premium Spotify iyo cancel maxkamad Spotify
Doorashadan la joojiyo ayaa laga heli karaa iyadoo Spotify noqon kartaa faa'iido weyn, waayo, dadka jecel in ay joojiso adeegyada ay la joogo mid ka mid ah waqtiga. Tani waxay heli karaa fursado, saamaxaya kuwa isticmaala inay kansasho Times ay joogaan mar walba oo isla goobtii bedelan kartaa in xubin xorta ah ee Spotify. Xulashooyinka la fo0r fursadaha xubin oo maxkamad lacag la'aan ah oo ay la socoto doorasho premium la Spotify ah waa la joojin karaa iyada oo user ee sabab kasta ee isaga u gaar ah.
Qaybta 1aad: Sida loo burin Spotify
Qeybta 2: Sidee to cancel premium Spotify
Qeybta 3: Sida loo burin maxkamad Spotify
La joojiyo aad rukun si Spotify noqon kartaa shaqo adag gaar ahaan haddii maxaad og tahay oo aan meesha laga helo fursad u joojiyaan hawshii Spotify. Sida aynu wada ognahay in Spotify ee ma bixiso lambarka taleefanka taageero ah, iyo xataa Shirkadda muuqdaan laga yaabaa in aysan ka jawaabin emails on degdeg ah ku salaysan. Sidaas darteed, si ay u joojisid account Spotify, waxaad u baahan tahay in ay gasho si ay u codsiga desktop Spotify ka kombiyuutar sida app ee mobile ma bixiyaan doorasho si aad u joojiso raad. Sidaas darteed, si looga fogaado in amarka Times bil kasta, waxaad u baahan tahay si aad u joojiso maxkamad la'aanta ah 30 cisho gudahood. Geedi socodka ah ee la kansalay ee Spotify waa sida soo socota:
Log in si aad Spotify account on your computer. Si kastaba ha ahaatee maskaxda ku hay in aad xisaabta ma joojin kartaa ka mobile ka.
Riix si aad Spotify username ee bar sare navigation, ka dibna riix Account. A dhakhsaha badan ee aad samayn in, aad Settings Account bogga lagu soo bandhigi doonaa.
No guji kaliya ku joogo Times tab ee navigation menu sare si uu u furo bogga Times Management.
Guji View Fursadaha Your xiri ee Cancel Your Times menu heli karo. Daah ah Options la joojiyo lagu soo bandhigi doonaa.
Markaas riix kaliya ee 'Riix Halkan si ay u sii Page joojiyo', goob joog ka link dhinaca hoose ee shaashadda. Page joojiyo is furi doonaa oo waxaad ku socoto in habka la joojiyo.
Next, waxaa lagu weydiin doonaa in ay galaan sababta loo joojiyo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in Nooca sababta loo joojiyo in sanduuqa qoraalka, ka dibna riix 'Cancel Times' badhanka. The Password degdeg ah qaab.
Nooca sirta Spotify duurka Password si loo xaqiijiyo la joojiyo.
Guji "Cancel Spotify Premium Times '. Taariikhda la joojiyo waxaa la soo bandhigay shaashadda. Your Times uu dhici doonaa maalinta bixinta soo socota waa sabab.
Si kastaba ha ahaatee, sida ii ah, ma jirto sabab to cancel Times ee Spotify.
Waxaa jira qaar ka mid ah tallaabooyinka habka la kansali ee account Spotify ah. Geedi socodka kansalay xisaabta isla markiiba bedelan kartaa wax user xubin xorta ah. Geedi waxaa lagu qeexi karaa sida soo socota:
Tag page lambarka. ( Fiiro gaar ah: Haddii aanad garanayn sirta ah, tag halkan si aad u ahaaneysa.)
Under Times iyo lacag bixinta , guji burin Times aad .
Dooro sabab (xulo sababo kale haddii aad la kansali loogu talagay ka gudubka a). Riix Continue.
Riix Cancel My Times.
Waxaad ku qortaa erayga sirta ah oo duurka ku sirta ah. Riix Cancel Spotify Premium Times.
Page Your Times hadda muujinaysa taariikhda aad ugu laaban doonta adeegeena ad ku salaysan Free. Waxaan rajaynayaa in aad go'aansato in aad mar kale u cusboonaynta!
Joojinta maxkamad Spotify la raaco karaa iyada oo talaabooyinka soo socda:
Tag qaybta cinwaanka iyo Cancel aan Times ", guji" View aad fursadaha "
2. Ugu hoose ee bogga soo socda, guji "Riix halkan si aad sii wadi bogga joojiyo"
3. Bogga soo socda, ka dooro mid ka mid ah sababaha ku qoran ee lagaga baxayo
4. Markaas, riix batoonka "Cancel Times"
> Resource > Spotify > Sida loo Cancel Spotify Premium iyo Cancel Trial Spotify